........HIGH WAY UP !: Oh! We Burmans by Maung Thant
ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာတရားက ဘုန်းတော်ကြီးများကို လောကီရေးတွင်ဝင်မစွက်ရန် တားမြစ်ထားသေးသည်။ သို့သော် အငြိမ့်ပွဲ ဇာတ်ပွဲတွေ သွားကြည့်ပါက ၀ါဝါ၀င်းဝင်းတွေ မမြင်ချင့်အဆုံး ဖြစ်တော့သည်။
ရည်ညွှန်း ။ Oh! We Burmans by Maung Thant
ေ၇ာသမမွှေ August 18, 2012 at 10:54 PM
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူပဲဗျုို့ shareလိုက်မယ်ဗျာ